Dhowr ka mid ah Shaqaalaha Caafimaadka Apple ayaa ka tagay Shirkadda | Wararka IPhone
Sanadihii la soo dhaafay, Apple waxay si weyn u kordhisay dadaallada dhinaca caafimaadka, xitaa ka hor intaan la soo saarin Apple Watch, qalab noqday Qiimaha shirkadaha caymiska caafimaadka, tan iyo markii loo maro kuwan, waad la socon kartaa haddii macaamiishaadu ay u nugul yihiin cudurada.
Dhowr ka mid ah shaqaalaha waaxda Apple Health ayaa ka tagay shirkadda ku taal Cupertino si ay ugu biiraan shaqaalaha shirkadda caymiska caafimaadka ee Anthem. Sida laga soo xigtay CNBC, bilihii la soo dhaafay in ka badan laba iyo toban shaqaale ah oo ka tirsan qaybta Apple Health ka mid noqotay shirkadan.
Sida laga soo xigtay warbaahintan, dadaalada ay Ahthem sameyneyso si ay u shaqaaleysiiso shaqaale caafimaad oo khaas ah waxaa ugu wacan xaqiiqda ay raadineyso casriyeyn u fidinta macaamiisheeda. Shirkadan ayaa had iyo jeer lagu gartaa inay saaxiibtinimo badan la leedahay macaamiisheeda, laakiin waxay u muuqataa in haddii aysan dooneynin inay sii wado luminta suuqa, ay tahay inay xoojiso dadaalkeeda, gaar ahaan marka laga hadlayo tartanka shirkadaha cusub, maadaama ay tixgelinayaan Apple.
Si kastaba ha noqotee, markii shaqaalaha qaar baxaan, wajiyo cusub ayaa imanaya si loo buuxiyo boosaskan banaan. Dhab ahaantii, Apple waxaa ka shaqeeya in ka badan 50 dhakhtar dhawaanahan waxay iskaashi la sameysay Waaxda Halyeeyada Mareykanka si ay ula socoto caafimaadkaaga iyada oo loo marayo iPhone ... Apple Health waxay noqotay barxad weyn oo ay isticmaalayaasha Apple iyo dhakhaatiirtuba, maadaama ay had iyo jeer gacanta ku hayaan dhammaan macluumaadka la xiriira macmiilka. caafimaadka, xogta lagu cusbooneysiiyo waqtiga dhabta ah.
Hada Apple Health, kaliya laga heli karo Mareykanka, oo xilligan la joogo waxay umuuqataa inaysan jirin qorshayaal lagu gaarsiinayo dalal kale, nidaam aan kaliya ka caawinaynin dhakhaatiirta maalinba maalinta ka dambeysa, laakiin sidoo kale ka caawin lahaa ogaanshaha cuduro mustaqbalka dhici kara sida ay nooca nolosha xiran yahay isticmaale kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Shaqaale badan oo ka tirsan Apple Health ayaa ka tagaya shirkadda
Shanghai waxay horey u laheyd xaruntii ugu horreysay ee Naqshadeynta iyo Horumarinta ee loogu talagalay horumariyeyaasha